Tag: angona fifamoivoizana | Martech Zone
Tag: angona fifamoivoizana
Raven Tools: Sehatra fitaovam-pitaovana SEO rehetra ho an'ny maso ivoho, mpiasa an-tsokosoko ary mpivarotra ao an-trano
Alakamisy, Aogositra 13, 2020 Alakamisy, Aogositra 13, 2020 Douglas Karr
Raven Tools dia fikarohana fikarohana, famakafakana ary tatitra momba ny varotra matotra izay misy ireo fitaovana rehetra ilainao hanatsarana ny fahitana an-tserasera sy ny varotra miditra. Anisan'ny mampiavaka ny Raven Tool Features ny Reports Marketing - refeso ny fahombiazanao amin'ny marketing amin'ny sehatra maro hahitanao izay mandeha, inona no tsy misy, ary inona ny fanovana tokony hatao amin'ny paikadim-barotrao. Site Auditor - mandinika haingana ny tranonkalanao hahitanao ny birao rehetra sy ny SEO finday
3 Fomba localisation votoatin'ny fotoana tena izy mba hampitomboana ny fifandraisana
Alakamisy, Aogositra 11, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Rehefa mieritreritra momba ny fanatontosana ny atiny ny olona dia mieritreritra momba ny angon-drakitra manokana tafiditra ao anatin'ny sahan-kafatra mailaka iray izy ireo. Tsy ny momba ny vinavinananao na ny mpanjifanao ihany no misy azy fa ny toerana misy azy ireo koa. Ny localisation dia fotoana lehibe handefasana varotra. Raha ny marina dia 50% amin'ireo mpanjifa mitady eo an-toerana amin'ny finday avo lenta no mitsidika magazay ao anatin'ny iray andro, miaraka amin'ny 18% mitarika amin'ny fividianana.